Itsva LGBT Kuzvikudza Kurangarira Kufona kweApple Tarisa | Ndinobva mac
Vhiki rino zviitiko zviri kufambira mberi uye ndezvekuti Apple ine zvairi kuona paWWDC uno uno Muvhuro, Chikumi 4, uye ivo vanoda kufambisira mberi basa. Mune ino kesi, mushure mekuvandudza Apple's Apple, tvOS uye watchOS (tinotarisira kuti vhezheni yekupedzisira ye macOS ichaburitswa nhasi) tinoziva kuti watchOS inowedzera nyowani yekuyeuchidza bhora re LGBT Pride zuva.
Zvinotaridza kuti chikamu ichi chinozowanikwa neMuvhuro unotevera, inova nguva inotanga kukosheswa naApple uye parizvino iyi nharaunda ichave nemavara emureza we LGTB. Iyi dial nyowani ingadai yatotakurwa muhurongwa hwekushanda hwewadhi dzekambani.vane watchOS 4.3.1 yakaiswa asi zvinoita sekunge hazvizove kusvika Muvhuro pauchazovhurwa zviri pamutemo.
Iyo sphere ine yehupenyu uye ichafamba senge yaive mureza. Iyo nguva haioneke mukutora, asi zviri pachena kuti inowedzera uye Ichagadziriswa kana iwe uchiita chiratidzo chekutenderedza ruoko sezvatinowanzoita nguva dzose paApple Watch yedu.
Apple inogona kuwedzera dzimwe nhau pasina kutaura navo
Zvinoita sekunge chinhu chakanaka pamusoro pezvese kunze kwekunge iro bhiza rinoratidzika kunge rakakura kwatiri, ndiyo nzira iyo Apple yakawedzera izvi muApple Watch ne4.3.1 iri nyowani uye inogona kunge iri nhanho isipo kuitira kuti muzvinyorwa zvinotevera zvinhu zvitsva dzinoonekwa izvi zvisati zvaziviswa zviri pamutemo. Zvinoitika kuti kuti uone kudhirowa mushandisi akafambisira mberi zuva rewachi yake uye dial iyi yekurangarira LGTB Pride yakazviratidza kwaari chaiko, zvinoreva kuti kubva kuCupertino vachakwanisa wedzera zvinhu zvitsva muhurongwa kuti uzviratidze mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyowani LGBT Yekudada Yekuyeuchidza Dial yeApple Watch
Inorova smart mutauri naSiri akafanotaurwa nezveWWDC 2018
CarPlay iri kuwedzera kugamuchirwa muEuropean uye United States